मुख्य पृष्ठ /समाचार/थपियो बर्जपात भर्खरै विमान दु’र्घटना हुँदा १४ जनाको मृ’त्यु – मनमा माया भए #RIP लेख्नुहाेस्!!
थपियो बज्रपात: विमान दुर्घटना हुँदा १४ जनाको मृ’त्यु, मनमा माया भए #RIP लेखकोलम्बियामा एउटा विमान दुर्घटना हुँदा १४ जनाको मृत्यु भएको छ । भिल्लाभिसेन्सियोबाट ताराइरा जाँदै गरेको डाउग्लास डीसी–थ्री विमान दुर्घटनामा परेको हो । ३० सिट क्षमताको विमान प्राविधिक खरावीका कारण दुर्घटना भएको हो । विमानमा चालकले प्राविधिक समस्या आएको जानकारी दिएलगत्तै विमान सम्पर्क विहीन भएको थियो । त्यसको एक घण्टापछि विमान दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
हार्दिक बधाई ! रमेश प्रसाईले मंसिर २२ मा नन्दासिंह सित बिहे ग’र्दै
दु’ खद खबर श्रीमान-श्रीमतिको एउटै चि’ तामा दा’ हसंस्कार
विश्व हिन्दु युवा संघ केन्द्रीय समितिको प्रबक्तामा विद्यार्थी नेता अनुराग शाहलाई मनोनीत
दुखद खबर, बर्दियामा दु’र्घटनामा परि श्रीमान श्रीमतिको ज्’यान गयो